9 talo oo kaa badbaadinaysa dhibaatada Internet-ka
Home Maskax-fur 9 talo oo kaa badbaadinaysa dhibaatada Internet-ka
Si aad uga badbaadid dhibaatooyinka Internet-ka, waxaad qaadataa talooyinkan hoos ku xusan.
Internet-ka ayaa waxaa uu noqday aalad aad muhiim ugu ah nolosha casriga ah ee aan ku wada nool nahay. Waxaa aad u badan faaiidada uu ku soo kordhiyo nolosheenna, balse waxaa sidoo kale jira, dhibaatooyin badan oo uu inoo keeni karo.
Isticmaal Anti-virus software
Waxaad Kombuyuutarkaaga ku shubataa anti-virus, waxaa jira kuwa aan lacag ahayn oo si fiican u qabanaya shaqada amaanka Kumbuyuutarkaaga.
2. Marnaba ha furin linkiyada
Tuugada internet-ka ayaa aad u xeelad badan, waxay soo maraan meelo badan si ay u xadaan macluumaadkaaga shakhsiyadeed. Haddii aad aragtid linki laguugu soo diray email-ka ama whatsApp-kaaga, amaba Facebook-ga, ha furin, iska tir. Linkiyada ayaa ah kuwa ugu khatarsan ee isticmaalaan tuugada internet-ka.
3. Haka qayb qaadanin ciyaaraha (quick games) iyo su’aalaha noocan ah ee aad ku aragtid Facebook;
Ka jawaab su’aal oo ku guulayso iphone, Kombuyuutar iyo wixii la mid ah, ogoow wax bilaash ah internet-ka lagama helo. Marnaba haka qayb qaadanin balan qaadyada noocaas ah.
Which celebrity do you look like? (Actor/Atooreheee ama atariishadee u egtahay, geli sawirkaaga) Waxay sidoo kale kaa qaataan macluumaadkaaga ku jira facebook.
Iska ilaali sahannada (Surveys) aad ka qayb qaadatid, si fiican iskaga akhri haddii ay yihiin kuwa aan ku xad gudbaynin amaanka macluumaadkaaga iyo inkale.
Marnaba haka jawaabin su’aalo aad ku aragtid Facebook, sida, cuntadee ugu jeceshahay? Baabuur noocee ayaad gadan lahayd? iyo wixii la mid ah.
4. Lambarkaaga sirta (Password)
Marnaba qof hala wadaagin lambarkaaga sirta ah, haa, xittaa qofka haddii aad si fiican u taqaanid.
Marnaba lambarkaaga sirta haka dhigin magacaaga, magacaaga iyo sanadka aad dhalatay, naanaystaada, magaalada aad ku dhalatay.
Marwalba haka koobnaado xarfaha sidan ah; Xaraf wayn, (A), mid yar, (a), lambaro kala duwan, Xarfaha noocan ah: (@, #, %, $)
5. https:// (Website)
Ha daalacanin websiteyada aan cinwaankooda lahayn (https://) u fiirso xarafka (s) in ay ku jirto. Ha isticmaalin kuwa aanan lahayn xarafka (s) oo sidan ah, (http://)
6. Marnaba ha furin warqadaha aadan hubin ama aqoonin meesha laga soo diray (Email attachments)
Tuugada ayaa aad u isticmaasha in ay warqadaha emailada soo raaciyaan fayrus ay ku xadaan macluumaadka qofka. Marna ha furin email aadan aqoonin meeshii laga soo diray, haddii aad furtid, iska ilaali in aad ku dhufatid warqad haddii ay la socoto.
Si aad u xaqiijisid, waxaad meesha email-ka korkeeda ka fiirisaa cinwaanka laga soo diray, iska hubi in uu address sax ah yahay oo uu ku dhamaado sidatan @gmail.com, hotmail.com, shirkad ama hay’ad aad taqaanid oo uu ku dhamaanayo sidan; @un.org, @maandeeq.com iyo wixii la mid ah.
Iska ilaali dadka iska dhiga in ay ka socdaan shirkado ama hay’ado caalami ah.
7. Kaamerada kumbuyuutarkaaga
Waxaad iska dabooshaa kaamerada kumbuyuutarkaaga, waxaad ku dabooli kartaa sharooto. Ogoow haddii aad iska dabooshid, tuug damco in uu internetka kasoo jabsado waxba kaama qaadi kari doono.
8. Ugaar ah dhalinyarada ( Sawirro iyo fiidiyoow aadan asturnayn)
Marnaba ha ogolaanin in aad qof u dirtid sawirro am fiidiyoow aad iska qaaday adiga oo aan asturnayn, xittaa haddii qofkaas aad xalaal isku tihiin, ogoow aalada la isticmaalayo waa internet, wax walba aad ku dirtid waxay yeelanayaan raadraac, waxaa lumi kara taleefanka qofkaas oo ay kujiraan sawiradaada, si xatooyo ah ayaa loo baxsan karaa, marnaba ha ogolaanin in aad qof u dirto sawirro ama fiidiyoow noocaas ah.
9. Ogoow wax walba aad taleefankaaga ka tirtid waala soo celin karaa
Waxaad ogaataa in taleefanada casriga ah ay halistoodu badan tahay. Wax walba oo sawir ah ama video oo aad tirtid, dib ayaa loo soo celin karaa iyada oo la isticmaalaayo barnaamajyo la dhoho (Data recovery software)
Talada aan kuu wado waxay tahay, marna taleefankaaga haku qaadin sawirro ama fiidiyoow aadan asturnayn. Waxaa suurtogal ah marka aad iska badashid in qof uu baaritaanada noocaas ku sameeyo, wuxuuna qofkaas soo faagi karaa sirtaadii oo dhamaystiran.
Previous articleSidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka (Qaybta 1-aad)?
Next articleSidee ciidanka Soomaaliya u badbaadiyeen diyaaraddii laga soo afduubtay Jarmalka? (Qaybta 2-aad)
8-da isbeddel ee jirakaaga ku dhaca 30 sano markaad dhaaftid
Ka hortag oo dib usoo cesho timahaaga adiga oon u baahanin beeridda tinta (Hair transplant)